IMARA.EARTH mbido nke na-atụle mmetụta gburugburu ebe obibi - Geofumadas
Machị, 2021 Cartografia, cadastre, Geospatial - GIS
Maka mbipụta 6 nke Magazin Twingeo, Anyị nwere ohere ịgba ajụjụ ọnụ Elise Van Tilborg, Co-guzobere IMARA.Earth. Mbido Dutch a n'oge na-adịbeghị anya meriri Planet Challenge na Copernicus Masters 2020 ma kpebisie ike na ụwa ga-adigide site na iji gburugburu.
Nkwupụta ha bụ "Jiri anya nke uche hụ mmetụta gburugburu ebe obibi gị", ha na-eme ya site na data na-amatapụta ihe dị ka onyoonyo satịlaịtị na nchịkọta ozi n'ọhịa iji nweta ozi ebumnobi maka atụmatụ, nlekota na nyocha nke ọrụ mweghachi ọdịda ala. Offọdụ n'ime ajụjụ ndị na-egosi na Ajụjụ ọnụ na-amalite na-ejighị n'aka nke Gịnị bụ Imara.Earth? IMARA. Ala, nke pụtara na ọ ga-akwụsi ike, sie ike ma sie ike na Swahili, ọkachamara na ịkọwapụta mmetụta gburugburu ebe obibi site na nka nke ịkọ akụkọ iji mee ka atụmatụ oru ngo siri ike, nyocha na mkpesa.
IMARA abụghị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ọmụma dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta.
IMARA.Earth na mkpa ọ dị kpaliri ya. Elise na ndị otu ya kwuru na ha ghọtara ọnụọgụ data dị na nzukọ yana na ejighị ya n'ụzọ ziri ezi, na-erigbu 100% nke ikike ya. Maka nke a, ha kpebiri ịmepụta ụlọ ọrụ a iji lelee data n'okpuru usoro nlekota na nyocha, na mgbakwunye na ntinye nke ihe onyonyo iji mepụta ozi gburugburu ebe obibi zuru oke na ebumnuche.
Elise gwara anyị na otu n'ime ihe mkpali ya maka imepụta IMARA bụ echiche ya na ekwesịrị iji data mpaghara iji kwado ọrụ ndị na-eme ka ọdịnihu nke ụwa ga-aga n'ihu. Ya na onye nchoputa ya Melisa nwere omumu ihe banyere International Land and Water Management, nke mechara tinye aka na nzere nna-ukwu na GIS na Sensing Remote,
Ihe onyonyo ya na ezi ozi nke ala na-eduga na ihe omuma na ihe omuma na ebumnuche ebumnuche n'oge atumatu, nlekota na nyocha nke oru mweghachi oru.
Dika ulo oru ndi ozo, oria ojoo a metutara ihe ha mere, ma ha choputara uzo ndi ozo iji gaa n'ihu, site na itinye ndi obodo n'ime oru ubi na iji ihe eji eme ihe. Ihe niile dị n'elu rụpụtara nleba anya na nyocha zuru oke nke rụpụtara ọnọdụ bara ụba maka ụlọ ọrụ ahụ. Na IMARA ha kwenyesiri ike na iweghachi ụwa, na-akwalite ọrụ mweghachi na ịchọpụta mmetụta nke ọrụ ndị a site na ijikọta ezigbo ozi sitere na mbara ala na data na-ahụ anya.
Remote N'ịchọpụta egosiwo bara uru n'oge niile n'ụzọ nke oru ngo development na ọ bụghị naanị maka quantifying mmetụta na ya.
Inwere ike ịga na netwọkụ mmekọrịta nke IMARA na LinkedIn ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị IMARA. Ala ka a mara gị maka ọrụ gị niile. Ọ baghị uru ịkpọ gị ka ị gụọ ọhụụ ọhụrụ nke Twingeo Magazine. Anyị na-echeta na anyị ghere oghe ịnata akwụkwọ ma ọ bụ mbipụta ị chọrọ igosi na magazin ahụ. Kpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị editor@geofumadas.com na nchịkọta akụkọ@geoingenieria.com. A na-ebipụta magazin ahụ n'ụdị dijitalụ -lelee ya ebe a- Gini ka ichere ibudata Twingeo? Soro anyị na LinkedIn maka mmelite ndị ọzọ.
Previous Post«Previous Akụkọ banyere achụmnta ego. Geopois.com
Next Post Robotik nwere mgbagwoju anyaNext »
Usoro PTC CREO Parametric Course - Design, Ansys and Simulation (3/3)
Creo bụ 3D CAD azịza nke na - enyere gị aka imeziwanye ihe ọgbara ọhụrụ ka ị nwee ike mepụta ka mma ...